Sp oo albaabada u furay inay xukuumad la dhistaan SV. - NorSom News
Home Doorashada 2021 Sp oo albaabada u furay inay xukuumad la dhistaan SV.
Sp oo albaabada u furay inay xukuumad la dhistaan SV.
Xisbiga SP oo ah xisbiga guusha ugu weyn ka keenay doorashadii baarlamaanka dalkan Norway, ayaa ugu danbeyn albaabada u furay inay kamid noqdaan xukuumad ka kooban xisbiyada Ap, SV iyo Sp.
Sp oo markii hore ku adkeysanayay inay rabaan xukuumad ka kooban Ap iyo Sp ayaa hada sheegay inay u furanyihiin qiimeynta inay la shaqeeyaan xisbiga SV oo siyaasad ahaan si uga aragti duwan xisbiga Sp oo inta badan difaaca danaha dadka beeraleyda iyo xoolaleyda ah ee kunool deegaanada ka fog magaalooyinka waaweyn.
Sadexdan xisbi ayaa hada u fariisan doono wada-xaajoodyo ay uga doodayaan heshiiska maanifeestada wada-shaqeynta dowlad ay soo dhistaan.
Sadexdan ayaa isku dar heysta aqlabiyad ay ku maamulaan Norway afarta sano ee soo socda.
Xigasho/kilde: Sp åpner for sonderingssamtaler med SV og Ap.
Previous articleDaawo: Meelahan ayaa isbadal laga filayaa, marka ay xilka la wareegaan xisbiyada bidixda.
Next articleWax ka baro sonkorowga asago af Soomaali ah!
Keydka NorSom Velg måned januar 2022 (36) desember 2021 (47) november 2021 (62) oktober 2021 (71) september 2021 (80) august 2021 (67) juli 2021 (53) juni 2021 (57) mai 2021 (48) april 2021 (67) mars 2021 (70) februar 2021 (51) januar 2021 (55) desember 2020 (50) november 2020 (67) oktober 2020 (75) september 2020 (53) august 2020 (82) juli 2020 (54) juni 2020 (69) mai 2020 (83) april 2020 (68) mars 2020 (130) februar 2020 (69) januar 2020 (84) desember 2019 (22) november 2019 (71) oktober 2019 (54) september 2019 (50) august 2019 (96) juli 2019 (77) juni 2019 (78) mai 2019 (79) april 2019 (40) mars 2019 (64) februar 2019 (61) januar 2019 (40) desember 2018 (25) november 2018 (52) oktober 2018 (33) september 2018 (44) august 2018 (33) juli 2018 (28) juni 2018 (28) mai 2018 (39) april 2018 (41) mars 2018 (55) februar 2018 (36) januar 2018 (85) desember 2017 (83) november 2017 (105) oktober 2017 (119) september 2017 (112) august 2017 (109) juli 2017 (125) juni 2017 (115) mai 2017 (122) april 2017 (108) mars 2017 (137) februar 2017 (114) januar 2017 (106) desember 2016 (98) november 2016 (101) oktober 2016 (83) september 2016 (44) august 2016 (44) juli 2016 (28) juni 2016 (44) mai 2016 (24) april 2016 (25) mars 2016 (1)